सर्वेन्द्र खनाल, महेश बस्नेत र किसन श्रेष्ठ वि’रुद्ध जाहेरी दर्ता हुन्छ: प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवाली – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
सर्वेन्द्र खनाल, महेश बस्नेत र किसन श्रेष्ठ वि’रुद्ध जाहेरी दर्ता हुन्छ: प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवाली
काठमान्डौ। समाजवादी पार्टीका सांसद डा.सुरेन्द्र यादवकाे अपहरणबारेको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गर्ने भएको छ । काठमाडौं प्रहरीले कार्यक्षेत्र नपरेको भन्दै आइतबार जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । सांसद यादवले सांसदद्वय महेश बस्नेत, किसन श्रेष्ठ तथा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालवि’रुद्ध आइतबार किटानी जाहेरी दिएका थिए । तर, काठमाडौं प्रहरीले महोत्तरी प्रहरीको कार्यक्षेत्र भन्दै जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीले यो घटनाको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गर्ने बताए छन् ।
उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘स्थानीय प्रहरी कार्यालयको आ-आफ्नो कार्यक्षेत्र हुन्छ । कार्यक्षेत्र बाहिर भएर आज जाहेरी दर्ता नभएको हुनसक्छ । कार्यक्षेत्र (महोत्तरी) मा पर्ने प्रहरी कार्यालयमा जाँदा जाहेरी दर्ता हुन्छ । जाहेरी दर्ता नभएपनि कानूनी उपचारको व्यवस्था छ ।’ जाहेरी दर्ता न’गरेको भनेर प्रहरी आलोचित भएपछि दर्ता गर्ने पक्षमा प्रहरी नेतृत्व पुगेको स्रोत बताउँछ ।काठमाडौं प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि कसरी अगाडि ब’ढ्नेबारे समाजवादी पार्टीका नेताहरु छलफलमा छन् । केही नेताहरु महोत्तरी जानुपर्ने पक्षमा छन् ।
सांसद यादवका कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा गएर जाहेरी दर्ता गर्न सुझाव दिएका छन् । महोत्तरीका एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले सांसद यादवलाई काठमाडौं लैजान सघाएका थिए । दुई सांसद र पूर्वआईजिपीलाई होटलमा रा’ख्नेदेखि सांसद यादवको लोकेसन पत्ता लगाउने काम उनले गरेका थिए । त्यसकारण महोत्तरी प्रहरीमा जान समेत पीडित यादव डराएका छन् । नेपाल बार एशोसियसनका महासचिव लिलामणि पौडेलले प्रहरी द’बाबमा परेर जाहेरी दर्ता नगरेको बताउँछन् ।
‘यो जाहेरी काठमाडौंमा दर्ता हुन सक्थ्यो । महोत्तरी नै जानुपर्छ भन्ने थिएन । अहिले यससम्बन्धी रिट पनि अदालतले नलिने अवस्थामा महोत्तरी जाउ भनिएको छ । सकेसम्म मुद्दा दर्ता नै नगर्ने नियत देखिन्छ’ उनी भन्छन्,‘ अहि’लेकै आरोपी पक्ष सर्वेन्द्र खनाल आईजिपी हुँदा रवि लामिछाने लगायतका केही मुद्दाहरु अन्यत्र जिल्लामा समेत दर्ता भएका थिए । अहिले उनी विरुद्धको मुद्दा आउँदाखेरी किन द’र्ता नहुने ? फौजदारी मुद्दामा त कसैले उजुरी नै नदिई पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने राज्यको कर्तव्य हुन्छ । जाहेरी नै लिन्न भन्नु भनेको कानून हातमा लिनु हो ।’
मुलुकी फौजदारी(कार्यविधि) संहि’ता ऐन २०७४ अनुसार जुनसुकै जिल्लामा पनि जाहेरी दर्ता हुन सक्ने प्रावधान छ । दबाबकै कारण डा. यादवको जाहेरी दर्ता न’भएको कानूनविद्हरुको भनाई छ । दफा ४(१) मा भनिएको छ– कुनै कसूर भएको, भइरहेको वा हुन लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने व्यक्तिले त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा आफूसँग भएको वा आ’फूले देखे जाने सम्मको सबुद प्रमाण खुलाई त्यस्तो कुराको लिखित जाहेरी दरखास्त वा मौ’खिक सूचना वा विद्युतीय माध्यमको सूचना अनुसूची–५ बमोजिमको ढाँचामा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा यथाशिघ्र दिनु पर्नेछ ।
सोही ऐनको दफा ५ मा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले जाहेरी दर्ता नगरेमा जिल्ला सरकारी वकिलकाे कार्यालय तथा माथिल्लो प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन सकिने उ’ल्लेख छ । सो दफामा भनिएको छ ‘दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम दिएको जाहेरी दरखास्त वा सूचना सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले दर्ता गर्न इन्कार गरेमा जाहेरी दरखास्त वा सू’चना गर्ने ब्यक्तिले त्यस्तो व्यहोरा खुलाई सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिलकाे कार्यालय वा त्यस्तो जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता गर्नु पर्ने प्रहरी कार्यालयभन्दा माथिल्लो तहको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त वा सू’चना सहित उजुर गर्न सक्नेछ ।’ ती कार्यालयले जाहेरी दर्ता गरेर सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै दफा ३ मा हुलाकमार्फत तथा विद्युतीय माध्यमबाट पठाएको जाहेरी दर्ता गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई झिकाई सनाखत गराउने सक्ने प्रावधान पनि रहेको छ । यो मु’द्दा लिएर पीडितहरु जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी जाने विकल्प खुल्लै छ । महोत्तरीले पनि दर्ता गर्न नमानेमा माथिल्लो कार्यालय वा हुलाकमार्फत जाहेरी दिएमा प्रहरी दर्ता गर्न बाध्य हुन्छ । त्यसपछि प्रहरीले पक्राउ पूर्जीका लागि अदालतमा प्रस्ताव गर्छ । अदालतले अनुमति दिएमा पक्राउ गरेर बयान लिने र पर्याप्त प्रमाण पुगेमा मुद्दा दायर तथा प्रमाण नपुगेमा मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिलकाे कार्यालयले गर्न सक्छ । नयाँ पत्रीका
Previous फोगटिया ग’फ चुटेर भत्ता प’ड्काउने नेता भन्दा बरु सत्य बोल्ने भिम उपाध्याय जाती: ज्वाला संग्रौला
Next वैदेशिक रो’जगार संघका अध्यक्ष दीपक राउत क्षे’त्रीले गरे यस्तो पुण्य कार्य!